रूसी मोटर चालकहरुलाई बीच हालै रेडियेटर रक्षा गर्न बम्पर मा एक जाल रूपमा धेरै लोकप्रिय सहायक यस्तो छ। मिति, यस्तो कुरा असामान्य छैन छ - यो लगभग हरेक दोस्रो कार छ। र किन्न कुनै पनि विशेषता स्टोर वा इन्टरनेट मार्फत हुन सक्छ। आज हामी नेट अगाडि बम्पर र के कार्यहरु यो कार्य आवश्यक किन कुरा हुनेछ।
किन आवश्यक छ?
अक्सर, मुद्दा तपाईंले हालै पहिलो कार र केवल मास्टर सडक expanse किनेको जो स्वतः कुरा, नयाँ छन्। यो प्रश्नको जवाफ धेरै सरल छ। युरोपेली देशहरूमा ड्राइभर लागि राजमार्ग (उदाहरणका लागि, डच) थप कुनै पनि खतरा छैन। अर्को कुरा हाम्रो सडक - ट्रयाकको को बीचमा रद्दीटोकरी, र रोडा, र पनि अधिक त schebonku गिरा वा लावा - तिनीहरूले सबै पाउन सक्नुहुन्छ। तर यी बाटोमा "आश्चर्य" देखिने छैन पनि भने, आराम छैन - तिनीहरूले मात्र सानो रकम हो। कहिलेकाहीं यो सानो कंकड पूर्ण रेडियेटर पुऱ्याउने हुन्छ। सीआईएस सडक मा यस्तो धूलो र अन्य साना कणहरु भरिएको छ, र यसैले, यात्रामा अप्रत्याशित breakdowns देखि आफूलाई सुरक्षाको लागि, यो आवश्यक पनि बम्पर मा एक एल्यूमीनियम जाल जस्ता कुरा किन्न छ।
यो कसरी टुक्रा गर्छ?
यसको सञ्चालन सिद्धान्त धेरै सरल छ। सानो पत्थर 90 किलोमिटर गर्न रेडियेटर जंगला मा झर्ने प्रति घण्टा, कार को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग हानिकारक बिना सहायक एउटा सानो सेल हिट। नेट बम्पर सडकको कार रद्दीटोकरीमा र धूलो भित्र स्लिप रोक्छ।
यस भागहरु बिना मामला छ?
क्षणमा, लगभग सबै कार निर्माताहरु प्लास्टिक जंगला संग कार उत्पादन। अक्सर प्लास्टिक भाग को किनाराको बीच दूरी4सेन्टिमिटर को चिन्ह भन्दा बढी छैन। र यस्तो प्वाल मात्र छैन धूलो, तर पनि एउटा ठूलो ढुङ्गा भित्र पस्नु गर्न सक्ने कुनै brainer। र गति नाप्ने यन्त्र सुई प्रति घण्टा 100 किलोमिटर देखाउँछ गर्दा पनि एक 1.5-मिलिमिटर पत्थर रेडिएटरको को सञ्चालन रोक्न सक्नुहुन्छ। साथै, गर्मी मा moths, लामखुट्टे, पुतलीहरु र अन्य जनावर प्राप्त गर्न। पनि जुन मा, धेरै मोटर चालकहरुलाई चिनार fluff, जो पनि रेडियेटर सेल clog ग्रस्त। र समय गरम करना हुनेछ मिसिन को भागहरु सफा गर्दैन, यदि र बारी मा यो adversely अन्य उच्च मूल्य एकाइहरु को प्रदर्शन असर गर्न सक्छ। नेट बम्पर रूसी सडक अपरिहार्य - त्यसैले निष्कर्षमा मात्र छ।
क्षणमा, यो सहायक औसत लागत वरिपरि छ $ 100 अमेरिकी। थुप्रै तरिकामा मूल्य ब्रान्ड र कार वर्ग मा निर्भर गर्दछ। यसरी, "लांसर" वा "ओपल Astra" को लागि नेट बम्पर 3000 rubles मा चालक खर्च हुनेछ। 500 rubles थप क्लास "ई" र मालिक भुक्तानी गर्नेछ «डी» कार (जो यस्तो "होन्डा अनुसार" को रूपमा minivans र crossovers समावेश, "टोयोटा को केमरी", "माज्दा 6" र धेरै अन्य मोडेल)। 4.5 हजार rubles (जस्तै "टोयोटा Prado" वा "Pajero" को रूपमा) प्रतिष्ठित बन्द-सडक वाहन को मालिक भुक्तानी गर्न हुनेछ।
जब यो एक कार किन्न राम्रो छ? एक कार किन्न गर्दा लाभप्रद गर्न?
एक दुइ बयलर नुस्खा मा Cutlets
Thyme। औषधीय जडीबुटी: thyme। फोटो
उत्सव मैनीक्योर जन्मदिन: फोटो
वजन मैन Coon मासिक। एक बिल्ली को बच्चा मैन Coon महिना द्वारा को उचाई र तौल
स्पिका star name। को काँध संयुक्त मा स्पिका star name
निर्देशन, प्रयोग र contraindications: दवादारू "टूथ थोपा"
के: यो लुगा धुने मेसिन INDESIT सक्रिय छैन? कारण